Nagu saabsan - Nanchang Biotek Medical Technology Co., Ltd.
Nanchang Biotek Medical Technology Co., Ltd. （Stock Code: 831448） waa shirkad tiknoolajiyad sare leh, oo ku takhasustay wax soo saarka, R&D iyo suuq geynta alaabta suuxinta. Our warshad cusub waxa uu ku yaalaa National Medical iyo Farmashiyaha Innovation Park, Aagga Horumarinta farsamada sare ee Nanchang, daboolaya 33,000 mitir murabac. Biotek waxay leedahay maamul tayo sare leh, R&D iyo koox farsamo. Waxaan leenahay tikniyoolajiyad kormeer sare iyo qolal nadiif ah, oo leh khibrad wax soo saar adag. Shirkadeena waxaa lasiiyay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ISO 13485 iyo shahaadada CE iyo shahaadada USA FDA. Waxaan haynaa dhowr shati farsamo, asal ahaan diiradda saaraya alaabta suuxdinta ee qalliinka kiliinikada.
Shirkadayadu waxay ganacsiga ka bilawday soosaarida alaabooyinka suuxinta ee waagii hore ilaa soosaarka suuxdinta iyo qalabka kalkaalinta ee ugu horumarsan xilligan. Noocyada alaabooyinka suuxdinta ah waxaa ka mid ah: Bamka Faleebada la tuuro, Maskaxa Laryngeal Airway, Tracheal Tube, Xoojinta Endotracheal Tube, Neefta Neefta, Filter Nidaamka Neefsashada, Maska Suuxdinta, Laryngoscope La-tuuro, Qalabka Laysku-daadiyo Suuxdinta, Kaydinta Kala-Bixiyeyaasha La Kala-tuuro on. Noocyada kala duwan ee kalkaalinta caafimaad waxaa ka mid ah: IV Cannula, Foley Catheter, Transducer Blood Press iyo wixii la mid ah.
Iyadoo falsafadda ganacsiga ee "Tayada Koowaad, Adeeggu Muhiim yahay" iyo sidoo kale ruuxda ganacsi ee "Midnimada iyo Daacadnimada, Sahaminta iyo Hal-abuurka", Biotek waxay si isdaba joog ah isugu xilsaartay inay noqoto "ganacsiga ugu kalsoonida badan ee ay ku abaalmariyaan suuxiyayaashu adduunka oo dhan". Waxaan si adag u aaminsanahay in cilmi baarista iyo hal-abuurnimadu ay yihiin dhiirigelinta horumarinta ganacsiga, tayada wax soo saarkuna ay tahay cududda taageerada kobaca shirkadaha.
Shirkadeena ayaa si kal iyo laab ah u soo dhaweynaysa dhamaan macaamiisha dal iyo dibadba inay soo booqdaan warshadayada kana wada hadlaan wax wada qabsiga iyo horumarinta warshadaha caafimaadka.